KNOWLEDGE – celepublic
ဝါတွင်းရက် (၉၀)စာ ကိုးနဝင်းပုတီးစိပ်နည်း
မကြာခင်မှာဝါဝင်တော့မှာဆိုတော့Saveထားလို့ရပါပြီဝါတွင်း (၃)လ ရက်ပေါင်း(၉၀)စိပ်တဲ့ ကိုးနဝင်းပုတီးစိပ်နည်းလေး စိပ်ရမဲ့ ရက်လေးတွေ သက်မှတ်ပြီးပါပြီဒုတိယဝါဆိုလပြည့်နေ့(ဓမ္မစကြာနေ့မှ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့)ထိဖြစ်ပါတယ်သက်သတ်လွတ်လည်း စားစရာမလိုပါဘူး အချိန်လည်း တိတိကျကျစိပ်စရာမလိုပါဘူး နေ့တိုင်း မှန်မှန်စိပ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ရှင့် စိပ်မဲ့ နေ့ရက်များ၉ပါးစလုံးကိုနေ့တိုင်းတစ်ပတ်စီအရဟံ (၁)ပတ်၊ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ (၁)ပတ် ၊ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော (၁)ပတ် ၊သုဂတော (၁)ပတ် ၊လောကဝိဒူ (၁)ပတ် […]
အိမ်ထောင်တစ်ခု မှာ မိန်းမ စကားနားထောင်ပျက် စီးသွားတဲ့ယောကျ်ား မရှိပါဘူး
အိ မ်ထောင်တစ်ခုမှာ မိန်းမစကားနားထောင်ပျက်စီးသွားတဲ့ယောကျ်ားမရှိပါဘူး..။ယောကျ်ားကိုမနိုင်လို့ လွှတ်ထားရပြီးပျက်စီးသွားတဲ့ယောကျ်ားတွေပဲရှိတယ်..။ မိန်းမ စကားအရမ်းနားထောင်နေလိုသင့်ကို သင့်friတွေမယားကြောက်လို့အမည်တပ်ပေမယ့်..၊ဘာကြောင့် လဲ သင့်မှာသင့်မိသားစု သင့်ကလေးကိုငဲ့လို့ သင့် သင်friတွေနဲ့လျောက်မသွားတဲ့အခါသင့်အမည်တပ်ခံရပေမယ့် သင့်ကလေးတွေဇနီးအတွက်တော့ ယောကျ်ားကောင်းဖြစ်နေမှာပါ..။ အချိန်တန် သင်နေမကောင်းအိုနာလာရင် သင့်ဇနီးနဲ့သင့်ကလေးတွေကပဲ သင့်ကိုအနီးကပ်စောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်..။မကောင်းတဲ့friအများစုကတော့ သင့်ကိုမယားကြောက်လို့အမည်တပ်လိမ့်မယ်..။သင့်မိသားစုအတွက် သင်ဟာ ငါအဖေဘယ်လောက်ကောင်းတယ်လို့ သားသမီးတွေဇနီးတွေရဲ့ချစ်ခြင်းခံရမှာပါ.
နံနက် အရုဏ်တက်ချိန် တွင်သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်ကြီးအားရွတ်ဖတ်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူး
နံနက် အရုဏ်တက်ချိန် ၅ နာရီတွင်သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်ကြီးအားရွတ်ဖတ်ရပါမည်။ရွတ်ဖတ်မည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှာလူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလျှင် ကိုယ်လက်သန့်ရှင်းခြင်း ခန္ဓာကိုယ် သန့်ရှင်းခြင်း သန့်ရှင်းသောအဝတ်စားကိုဝတ်ဆင်ခြင်း ရဟန်းမှန်သမျှဒေသနာကြားခြင်း ကိစ္စ ကိုဆောင်ရွက်ရပါမည် ။၅၁၂၀၂၈ ဆူကုန်သော ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့အားရည်စူး၍ဆွမ်း၉ပွဲရေ၉ခွက်ပန်း၉ပွင့်ဖယောင်းတိုင် ၉တိုင်ထွန်း အမွှေးတိုင် ၉ တိုင် ထွန်း ၍ ကပ်လှုပူဇော်ရမည်။ပြီးနောက် ၅ ပါးသီလတော်ကိုခံယူဆောက်တည်ပါ။နတ်များကို ဖိတ်ကြားရပါမည်။ ဖိတ်ကြားပုံမှာ […]
နိုဝင်ဘာလ က သိန်း(၁၅၀၀၀)ပေါက်သွား ခဲ့ တဲ့ အဘွား မျှဝေပေးလိုက်တဲ့ ထီပေါက်စေတဲ့ဂါထာတော်
အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာကို ထီပေါက်တဲ့အဖွားပေးခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာပါသူဌေးမင်း ထီဆိုင်ကြီးမှ ကူးယူဖော်ပြအပ်ပါတယ်။အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ ရှေးကျမ်းရင်း တစ်စောင်မှာဖော်ပြထားပြီး အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာဖြစ်ပါတယ်။ဂါထာ ရဲ့ အဓိပ္ပါယ် အတိုချုပ်ကဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရား ရှိစဉ်က ကောဏ္ဍဝေန မထေရ်ကြီးသည် ပထမစာရေးတံမဲကို အမြဲတမ်းပေါက်ခဲ့၏ ထို့အတူ ကျွန်ုပ်သည်လည်းဤသို့ ဖြစ်ရပါစေသတည်း” ဟု ဆိုထားပါတယ်။ရှေးဟောင်း […]
အမေရော အဖေရော အဖွားပါ သေဆုံးသွားလို့တစ်ယောက်ထဲ ရပ်တည်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့ ၁၀ နှစ်ကလေး
ဘဝမှာ ဆွေမျိုးမိဘမရှိဘဲ တစ်ယောက်တည်းရပ်တည်ဖို့ ဆိုတာ တကယ်တော့မလွယ်ပါဘူး…..ဒါပေမဲ့ ခုပြောပြမဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးထဲကအသက် ၁၀ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ ကလေးငယ်ဟာ တစ်ယောက်တည်းဘဝကို ရပ်တည်ဖြတ်သန်းနေရတာပါ….ငယ်စဉ်ကတည်းကအမေဖြစ်သူက ဆုံးပါးသွားတာဖြစ်ပြီးအဖေကလည်း ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမားတစ်ယောက်အဖြစ် အဝေးမှာ အလုပ်လုပ်နေရသူပါငယ်စဉ်ကတည်းက မိဘနဲ့ခွဲနေရတဲ့ Dang Van Khuyen လေးဟာ ဖခင်ဖြစ်သူအလုပ်လုပ်ပြီး ပို့ပေးတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ အဘွားဖြစ်သူနဲ့အတူ […]
ပင်လယ်အောက်က ပစ္စည်းတွေယူလာပြီး လူတွေကို လက်ဆောင်ပေးနေတဲ့ လင်းပိုင်လေး
လင်းပိုင်လေးတွေကတော့ ပင်လယ်ပြင်မှာ လူတွေရဲ့ အချစ်ဆုံးသတ္တဝါကလေးတွေဖြစ်သလို လင်းပိုင်လေးတွေ တော်တော်များများကလည်း လူယဉ်တဲ့ သတ္တဝါလေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း သြဇီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Barnacles Dolphin Center ရှိ Mystique လို့ အမည်ရတဲ့ လင်းပိုင်လေးဟာ သူတို့စခန်းကို အလည်ရောက်လာတဲ့ Volunteers တွေကို ပင်လယ်ရေအောက်ကပစ္စည်းလေးတွေကို ပြန်ပြန်ယူပြီး […]
စတိုးဆိုင်ကို ဖရဲသီးအခွံစွပ်ပြီး ဓားပြတိုက်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားနှစ်ဦး အဖမ်းခံရ
စတိုးဆိုင်ကို ဓားပြဝင်တိုက်တဲ့ အမှုတော်တော်များများကို လူတိုင်းကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ဓားပြတွေက မျက်နှာကို ပုဝါစည်းပြီး ဓားပြတိုက်ခဲ့သလို တစ်ချို့တွေကတော့ CCTV ကနေကြည့်ရင် မျက်နှာကို မနြင်အောင် ခေါင်းစွပ်အကြီးတွေ စွပ်ပြီး ဓားပြတိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ Virginia ပြည်နယ်မှာ စတိုးဆိုင်ကို ဓားပြဝင်တိုက်တဲ့ အမျိုးသားနှစ်ယောက်ဟာ ဖရဲသီးကို အတွင်းသားတွေထုတ်ပြီး […]
လူမဟုတ်တဲ့ အသက်တစ်ချောင်းတောင် တန်ဖိုးထားပြီး ချန်မထားခဲ့တဲ့ ထိုင်းကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲဝင်များ၏ လုပ်ရပ်
မင်္ဂလာညချမ်းပါ စာဖတ်သူတို့ ခင်ဗျာ… နေ့စဉ်ရက်ဆက် သတင်းဆိုးတွေပဲ ဖတ်နေရလို့ စိတ်ပျက်နေကြပြီလား ခင်ဗျာ…ဒီတခါတော့ ကျွန်တော်တို့ တင်ဆက်ပေးခြင်တာကတော့ စိတ်ကြည်နူးစရာ သတင်းလေး တစ်ပုဒ်ပါ ခင်ဗျာ ယနေ့ ၁၁: ၁၅ မိနစ်မှာ ထိုင်းတပ်မတော်က ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် တောထဲမှာ မျက်စေ့လည်လမ်းမှားနေတဲ့ ခွေး ၃ ကောင် […]
အခက်ခဲကြုံလျှင် မျော်လင့်မထားဘဲ လိုရာပြည့်နိင်စေသောနည်း . . .
လိုအပ်သူများအတွက် မျှဝေခြင်းပါ မိမိအိမ်ဘုရားတွင် မိမိမွေးနေ့တွင် လှူပါ အနီးဆုံး အခက်ခဲကိုကျော်ကာ လိုရာပြည့်နိင်၏ သင့်တော်ရာ ဖန်ခွက်ပေါ် ပန်းကန် ပန်းကန်ပေါ် ကိတ်မုန့် တင်လှူပါ နေ့ခင်း (သို့မဟုတ်) ညနေ / ည ဘက် စွန့်ပြီးစားသုံးနိင်ပါသည် တနင်္ဂၤနွေသားသမီးများ ဖန်ခွက်ထဲ အုန်းရည် (သို့ […]
ဘုရားရှင် အား တစ်ကြိမ် ဦးချ ရခြင်း အကျိုး
ဘုရားရှင် အား တစ်ကြိမ် ဦးချ ရခြင်း အကျိုး ဖတ်ကြည့်နော်… တစ်ခါတော့… ဘုရားရှင်ဟာ နံနက်မိုးသောက်ထတဲ့ အချိန်မှာ မဟာကရုဏာသမာပတ်ဝင်စားရင်းစဏ္ဍာလတင်း ကုပ်မှာနေတဲ့ သက်တမ်းကုန်နေတဲ့ အဘွားအိုတစ်ယောက်ကို သွားမြင်တော်မူပါတယ်။ သူ့နာမည်က စဏ္ဍာလီတဲ့။စဏ္ဍာလီ အမည်ရှိတဲ့ အဘွားအို ဟာအခု မနက်ခင်းမှာပဲ သေတော့မယ်။ပြီးတော့ ဘာကုသိုလ်မှ လည်း […]